Shina 63MM / 2.5 Grine Herb Grinder 4 Pieces Zinc Alloy Grinder miaraka amin'ny orinasa mpanao sary sy ny trano | Hemgrinder
Alimanaka alla aluminium
Hazo vita amin'ny hazo
Voarindra mialoha ny voadona
Formula-voly / voninkazo
Ny Jiro Bararata
63MM / 2,5 Inch Herb Grinder 4 Pieces Zinc Alloy Grinder miaraka amin'ny Drawer
Ny fikorontanana ahitra 4 sombin-tany sy efitrano 3 dia ahafahan'ny mitoto, ny fitahirizana ary ny sivana amin'ny vovobony. Ity fikosoham-bary ho an'ny zavamaniry ity dia endrika fanamboarana tapa-bolo 4 dia mora mamatsy azy ireo, manome fanampiana mora sy fanadiovana ahitra amin'ny fikosoham-bary.
Item No .: GSRP2603
rihana: 4 Tavoahangy
Habe (Diameter x Haavo): 2,5 x 2.6 santimetatra (63 x 66mm)
Mitombo ny lanjany: 252g
Mangataha teny anio!
* Ny fikorotanana ahitra 4 sombin-tany sy efitrano 3 dia ahafahan'ny fikorotanana, fitahirizana ary fandefasana vovobony. Ity fikosoham-bary ho an'ny zavamaniry ity dia endrika fanamboarana tapa-bolo 4 dia mora mamatsy azy ireo, manome fanampiana mora sy fanadiovana ahitra amin'ny fikosoham-bary.
* Ny tampony mazava dia ahafahanao mandinika ny fizotran'ny fikosoham-bary manontolo, ny fakana sary dia mamela anao maka ireo zavatra mikosoka amin'ny fotoana rehetra. Mesh ny efijery filam-bary mifangaro vovobony be dia be, ny scraper kely tafiditra dia manampy amin'ny fanangonana vovony.
* Mety amin'ny fikosoham-bary, zava-manitra, dite, sns. Ny fikosoham-bary miaraka amin'ny takelaka mahery vaika dia manampy betsaka amin'ny fampihenana ny fandorana sy ny fitazomana ny zava-maniry maintso sy ny fofona tsy misy fofona.
* Ity mazoto kely manitra ity dia vita amin'ny metaly allinca mateza sy maharitra. Ny nify maranitra dia manome traikefa haingana anao haingana kokoa.Thin Poly O-Ring ho an'ny fikosoham-bary malefaka ary tsy dia misy korontana intsony.
* Ny savonin'ny avana 2,5cm ny savaivony, 2,6nn avo, fahaiza-manao ampy ary tsara ny habeny, tsara tarehy sy mahazatra. Ny lokon'ny avana manja sy tsara tarehy.
Efitra 4 sy efitrano 3 ahafahan'ny fikorotanana, fitahirizana ary fandefasana vovobony.
* Famolavolana tapa-4 dia manafoana mora, manome mora sy hanadiovana ny bozaka ahitra.
* Ny tampony mazava dia ahafahanao mandinika ny fizotran'ny fikosoham-bary manontolo, ny fakana sary dia mamela anao maka ireo zavatra mikosoka amin'ny fotoana rehetra.
* Ny efijery Mesh an'ny sivana mifangaro ny vovobony tena tsara, ny scraper kely tafiditra dia manampy amin'ny fanangonana vovony.
* Ny sarona magnetika mahery dia manampy amin'ny fampihenana ny fandorana sy ny fitazonana ny ahitra maimaimpoana sy fofona maimaimpoana.
* Ny nify maranitra dia manome traikefa haingana anao haingana kokoa.Thin Poly O-Ring ho an'ny fikosoham-bary malefaka ary tsy dia misy korontana, maharitra kokoa.
Manorata fanamarihana iray ary hiverina eo aminao haingana araka izay azo atao izahay.
63MM / 2.5 ″ Black Piece Spice Grinder Zin ...
63MM / 2,5 inc Zinc Alloy Hatramin'ny Heriny Mahitsy
63MM / 2.5inch Herb Grinder Voasary loko 4 Piece ...
Adiresy: 1816 Bldg G, panorama tanàna Hualian, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, Sina
1816 Bldg G, panorama tanàna Hualian, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, Sina
© HEMGRINDER 2020 REHETRA REHETRA REHETRA.